वर्षमान पुन भन्छन्– ‘केपी ओली नै अहिले हाम्रो नेता’… — Newskoseli
वर्षमान पुन भन्छन्– ‘केपी ओली नै अहिले हाम्रो नेता’…
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको साता बितिसकेको छ । तर, गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र अझै सरकारमा संलग्न भइसकेको छैन ।
पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद र एमालेसँगको पदीय भगबन्डाको अन्तिम छिनोफानो नभएकाले सरकार विस्तारमा विलम्ब भइरहेको हो । यसै सन्दर्भमा सरकार विस्तार र पार्टी एकतासम्बन्धी दुवै काममा उत्तिकै सक्रियतापूर्वक लागिरहेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले यतिबेला आफूहरू सबैको नेता केपी ओली भएको बताएका छन् । उनै पुनसँग आइतबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका लागि दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानीका केही अंश–
पार्टी एकतामा नेता–कार्याकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
हामी करिव ५० वर्ष अलग–अलग स्कुलिङमा हुर्किएका पार्टी हौं । त्यैले संयम र धैर्यतासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दुवै पार्टीमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । कसले के छोड्यो हिजाे तर हामी सबैले अहिले नेतृत्वलाई शंकाको लाभ दिऔं । एकता हुँदा कोही घटुवा हुने वा कोही बढुवा हुने भन्ने होइन, यसबाट बेखुसी पनि हुनु पर्दैन । वरिष्ठ नेता–कार्यकर्ता सबैलाई उचित कार्यविभाजन र सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं । यसले सबै तहका नेताहरु इतिहासले लिएको यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कोसिस गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।
पार्टी एकता कहिलेसम्म भइसक्छ ?
दुई कार्यदलले १५ दिनको समय पाएका छन् ।अब यस अवधिभित्रै हामी हाम्रो प्रतिवेदन र सुझाव तयार गर्छौं । अनि नेतृत्वमा छलफल गरेपछि चैतको पहिलो साता एकतामा पुगौंला । सुरुमा केन्द्र, त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला र पेशागत संगठनको एकीकरण गर्ने विधि हुन्छ ।
माओवादी सरकारमा समामेल हुन किन ढिलाई गरिरहेको छ ?
पहिले गठबन्धन बनाउँदा सरकार बन्छ अनि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कल्पना थियो । तर, निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएपछि एकता प्रक्रियामा केही आरोह–अवरोह देखियो । अनि त्यही बीचमा सरकार बनाइहाल्नुपर्ने भयो । त्यसैले दुवै दलबीच सबै विषयमा कुरा टुंगिसकेको थिएन ।
अब मन्त्रालय बाँडफाँट करिब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा अब सरकार विस्तार भइहाल्छ । माओवादी त तयारी अवस्थामै छ ।
सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम तय गरिसक्यो त माओवादीले ?
मोटामोटी तयार भएको छ । पठाइने साथीहरुको नामको ‘रोस्टर’ नेतृत्वमा तहमा तयार छ ।
‘म अहिले बोल्दिनँ’ भन्दै निलम्बित एसपी विष्टले भने…
‘संसदमा को छ म जस्तो नेता ?’
गुटबन्दीको सिकार भएँ : अष्टलक्ष्मी शाक्य
देउवा सरकारका थुप्रै निर्णय पटक्कै चित्त बुझेका छैनन् : डा. शेखर